Muse Dash Apk misintona maimaim-poana ho an'ny Android  | APKOLL
Muse Dash Apk misintona maimaim-poana ho an'ny Android 
Febroary 11, 2022 Janoary 10, 2022 by Reyan Ahmad
Misy zavatra roa, izay tian'ny olona atao rehefa leo. Ny fihainoana mozika na lalao, no fomba tsara indrindra hankafizana ny hetsika rehetra. Noho izany, tianao ve ny hampiditra ireo hetsika roa ireo ho iray? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana mahagaga indrindra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Muse Dash Apk. Izy io dia manolotra ny fanangonana mozika tsara indrindra, izay azon'ny mpampiasa henoina rehefa milalao.
Fantatrao fa misy lalao samihafa hita eny an-tsena, amin'ny alalanao no ahafahanao manana traikefa tsara. Misy fanangonana lalao hafa, izay misy hetsika, traikefa nahafinaritra, mozika ary maro hafa. Ireo fampiharana rehetra ireo dia manome gameplay tsara ho an'ny mpampiasa, hankafizany ny fotoana malalaka ananany.
Fa ny olana dia ny fahazoana ireo endri-javatra rehetra ireo amin'ny fampiharana iray, izay tsy azo atao ny mieritreritra fa afaka manana ny fialamboly rehetra amin'ny fampiharana iray isika. Raha mitovy ny eritreritrao dia diso ianao. Ankehitriny ianao dia afaka mahazo ireo fiasa rehetra ireo amin'ny fampiharana iray ary mahazo ny traikefa tsara indrindra.
Eto izahay miaraka amin'ity rindranasa ity, izay manome ny mpampiasa hiditra amin'ny serivisy rehetra misy amin'ireo fampiharana kilalao samihafa ao anatin'ny iray. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'ity rindranasa ity ianao dia mila mijanona miaraka aminay fotsiny ary mizaha izany rehetra izany.
Topimaso momba ny Muse Dash Apk
Izy io dia fampiharana lalao mozika Android, izay manolotra lalao gadona finday. Manolotra fanangonana mozika sy hira mahavariana hafa izy io, izay azon'ny mpampiasa arahina amin'ny fampiasana ny fanaraha-maso ary manampy karazana feo hafa miaraka aminy. Misy endri-javatra samihafa azo alaina amin'ity lalao ity, izay azon'ny mpampiasa ankafizina.
Amin'ny voalohany, dia ho azonao ny tari-dalao, izay ahafahanao mahatakatra ny fifehezana ny lalao rehetra. Misy sari-tany misokatra voalohany, izay tsy maintsy nofenoin'ireo mpampiasa. Ao amin'ny sarintanin'ny Muse Dash App dia ny làlana na ny hira, izay mihidy ary ny mpampiasa dia tsy maintsy mamoha azy ireo amin'ny isa.
Misy bokotra fanaraha-maso roa amin'ny ankapobeny, izay ahafahanao mifehy ny toetranao. Y sy Play no bokotra roa, ahafahanao mifehy. Ny bokotra Y dia manolo-tena hiady amin'ny fahavalon'ny tany ary ny bokotra filalaovana dia manome ny mpampiasa hitsambikina sy hiady amin'ireo fahavalo manidina.
Noho izany, miaraka amin'ireo lalana, dia manatona anao ny fahavalo samihafa. Misy roa ity, izay azonao atao mba handresena. Ny fomba voalohany dia ny famonoana azy ireo, izay mamorona feo hafa ihany koa ary ny fomba faharoa dia ny koba, izay mazàna tsy mandeha amin'ny fotoana rehetra, raha tsy rehefa miatrika lelan-tany ianao.
Misy fahavalo samy hafa ary koa zavatra. Ny fahavalo dia azo vonoina, fa tsy afaka mamono zavatra sasany ianao. Ny lelany no safidy tsara indrindra, izay tsy azonao vonoina. Noho izany, manoro hevitra anao izahay handrendrika azy ireo. Tsy maintsy milalao hatramin'ny farany ianao ary manongana ny sefo. Raha vantany vao esorinao ny sefo dia hifarana ny làlana ary ho tonga amin'ny ambaratonga manaraka ianao na hamaha làlana hafa.
Misy ihany koa ny biby fiompy na namana azo alaina, azonao atao ny manokatra ny toetranao. Ny biby fiompy dia hiaraka amin'ny toetranao foana ary hanome endrika mahagaga. Raha te hanova ny toetra ianao, dia misy tarehin-tsoratra samihafa azo alaina ho anao.
Azonao atao ny misafidy mora ny toetra misy ary manomboka milalao ny lalao mahafinaritra. Misy maody samihafa koa azo alaina, izay ahafahanao mitendry mozika tsy misy farany na olon-kafa. Hisy fanavaozam-baovao bebe kokoa amin'ny ho avy, amin'ny alalany no hanampiana fampiasa hafa.
Nozarainay ny sasany amin'ireo fiasa amin'ity lalao ity, saingy misy zavatra maro hafa azo zahana ho anao. Noho izany, sintomy fotsiny ny fitaovana Muse Dash For Android ary manomboka milalao ny lalao mahatalanjona. Raha te hizaha lalao sy fampiharana bebe kokoa ianao dia tsidiho hatrany ny tranokalanay.
anarana Muse dash
Anaran'ny fonosana com.prpr.musedash
Developer Network XD
Afaka alaina eto amin'ity pejy ity
Sehatra mozika sy filalaovana tsara indrindra
Fantaro ny mpanakanto anaty anao
Mitadiava Lalana Mahagaga
Manangana ny mozika anao manokana
Mamoha làlan-kaleha vaovao
Toetra tsara tarehy sy manintona
Fanangonana maro ny mpanaradia na biby fiompy
Voninahitra Jeneraly 3 Apk
Raha te hampidina ity rindranasa ity ianao dia eo amin'ny toerana mety. Hizara ny kinova farany an'ity app ity izahay ary rohy mivantana. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eto amin'ity pejy ity ary manisy paompy tokana ao aminy. Hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fisintomana.
Mikaroka fomba vaovao hamoronana feo ary ampio amin'ny dian-tongotra samihafa. Afaka manana fahafinaretana mahagaga ianao amin'ity fampiharana ity ary mahazo fahafinaretana mahafinaritra. Noho izany, misintona Muse Dash Apk mahazo izany rehetra izany. Raha manana olana ianao dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Sokajy Games, Music Tags Muse Dash Apk, Muse Dash App, Muse Dash Ho an'ny Android Post Fikarohana
Better Anime Apk Download Ho an'ny Android [Anime maimaim-poana]